» स्ट्रोक के हो, कसरी बच्ने यसबाट ?
स्ट्रोक के हो, कसरी बच्ने यसबाट ?
२०७५ कार्तिक २४,शनिबार ०७:५०
काठमाडौं /एजेन्सी । सानेपा घर भएकी ६० वर्षीय कान्छी थापाको अचानक शरीरको दायाँ भाग चल्न छोड्यो। बोली पनि स्पष्ट नबुझिने भयो। परिवारका सबै सदस्य आत्तिएर उनलाई अस्पताल पु¥याए। अस्पतालमा जाँच गर्दा थाहा भयो, स्ट्रोक भएको रहेछ।
छिटो अस्पताल पु¥याएकाले नआत्तिन डाक्टरले आग्रह गरे। डाक्टरले भनेअनुसार औषधि दिएको दुई घन्टापछि उनी पहिलाको जस्तै बोल्न थालिन्।
उनी जस्तै स्ट्रोक भएर ४ घन्टाभित्र अस्पताल आउने बिरामीलाई थ्रोम्बोलोसिस दिएपछि स्वास्थ्यमा छिटो सुधार हुने बताउँछन् वरिष्ट न्युरोलोजिस्ट बाबुराम पोखरेल। उनका अनुसार यदि ढिला गरेर अस्पतालमा पु¥याएमा स्ट्रोकका बिरामीले विभिन्न स्वास्थ्य समस्या भोग्नु पर्छ।
स्ट्रोक भएको थाहा पाएपछि के गर्नेरु
नेपालमा स्ट्रोक अवस्था कस्तो छ रु
स्ट्रोकबाट बच्न के गर्नुपर्छरु